04 Nov, 2019, 18:09 GMT
HARARE, Zimbabwe, Nov. 4, 2019 /PRNewswire/ -- The Government of Zimbabwe and conservation non-profit African Parks signed a 20-year agreement on Friday November 1st for the management of the iconic Matusadonha National Park. African Parks in partnership with the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority will implement management strategies to secure the park and restore wildlife populations, unlocking its ecological, social and economic value enabling communities to derive long-term benefits.
"Zimbabwe is among the world's richest nations in natural resources and wildlife. These are assets which have drawn millions of visitors annually and form a vital base for our economy" said Mr. Fulton Mangwanya, Director-General of the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. "Our public-private partnership with African Parks to restore Matusadonha helps to leverage conservation further as a sustainable mechanism for growth, promoting a tourism economy to benefit people while ensuring the protection of Zimbabwe's wildlife."
"We are proud to be partnering with the Government of Zimbabwe for the first time to develop the potential of one of its most exceptional national parks" said Peter Fearnhead, CEO of African Parks. "Zimbabwe has a strong history of conservation excellence, and our shared ambition is to ensure that Matusadonha is revitalised as one of southern Africa's leading protected areas."
African Parks: Rob and Melani Walton Foundation Make a...